Mampivarotra momba ny savony ny savony
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana fandroana sensor / WOWOW Mpaninjara savony tsy misy kitapo
WOWOW Mpampiasa amponga tsy misy dikany momba ny varotra
Ny dispenser savony sensor automatique dia afaka manadio sy manantona ny rano manasa tanana rehefa manasa tanana, ary afaka mampiasa ranon-tsavony mba hanadiovana tanana tsy hikasika, izay tena mety sy madiodio.
Tsy misy kitapom-bary tsy misy makasy
Noho ny pandemika, sahala amin'ny fivoahan'ny COVID-19, ohatra, mahatsapa fa marefo ny fahasalamantsika ary tokony hitandrina hatrany ny fahadiovantsika isika mba tsy ho tratry ny aretina. Ary tsy hahitana otrik'aretina hafa. Indrindra fa any amin'ny toerana be olona, ​​tokony ho fantatsika tanteraka momba ny fahadiovana, ary tokony homena fitaovana ny fisorohana ny fihanaky ny tsimokaretina na bakteria. Ireo zavatra izay voakasika matetika, toy ny voromailala sy faucets, dia tokony hodiovina matetika mba tsy ho voan'ny moka. Ary mandritra ny pandemika dia tokony mihoatra noho ny zavatra rehetra ianao, ny fisorohana ny tanana. Fa ambonin'izany rehetra izany dia tena ilaina ny manasa tànana tsy tapaka. Rehefa misasa matetika amin'ny tananao ianao, dia mihena ny fihenan'ny bakteria hiparitaka ary mahatonga ny olona marary na mararin'ny virus.
Amin'ny WOWOW dia miahy ny fahasalamana isika ary ny vokatra rehetra dia natao hatrany amin'ny fahasalamanao ho tanjona lehibe. Izany no antony nanamboaranay ity dispenser savony tsy misy fotony ity mba hanomezana fampiononana feno sy fomba ho an'ny mpiasa sy mpanjifanao, ary fomba iray azo antoka hanakanana ny tsimokaretina sy ny bakteria tsy hiparitaka.
Fanesorana ny savony tsy misy pentina miaraka amin'ny sensor infra-mena
Any amin'ny toerana misy ny besinimaro dia tianao ny hisoroka ny zavatra rehetra amin'ny tananao tsy misaraka mba tsy hifandray amin'ny mikraoba. Izany no antony nanoloran'i WOWOW an'io sabatra tsy misy fanaperana io amin'ny teknolojia infra-mena. Rehefa mitazona ny tananao ianao eo ambanin'ity dispenser savony tsy misy fotony ity dia handray sabatra tsara eny an-tananao ianao, nefa tsy hikasika na inona na inona. Miaraka amin'ny gripo tsy misy kitapom-batana, afaka manasa soa aman-tsara amin'ny tananao ianao, tsy mila manao tritika sarotra hialana amin'ny fikasihana zavatra.
Ny mpanamory savony WOWOW dia tsy afaka ampiasaina any amin'ny toerana isan-karazany, toy ny trano fidiovana na lakozia, ohatra, trano biraon'ny hopitaly, hopitaly, banky, toeram-pivarotana lehibe ary toerana maro hafa. Ity dispensera savony tsy misy fotony ity dia namboarina fitaovana vita amin'ny fitaovana avo lenta mba haharitra ela any amin'ny toeram-bahoaka. Na dia ny fampiasana mahery vaika vita amin'ny savily ity dia tsy afaka mora foana. Tsy misy na dia maro aza ny orinasam-pifandraisana iraisam-pirenena matoky ny mpanentana tsy misy fanapahana ny WOWOW hitantana ny fipoahan'ny COVID-19.
Multivunction tsy misy savony dispenser
Natao ho an'ny savony io dispensera savony io. Saingy afaka mampiasa ranon-javatra ianao ao amin'ity dispenser sensor infra-mena ity. Azonao atao ny mameno azy amin'ny disinfectant, sanitizer tanana, ranon-tsakafo na mason-tsivana na masoandro aza. Azonao atao mihitsy ny manolotra dispenser savony tsy misy fotony, ohatra ny iray amin'ny savony tanana ary ny iray hafa voan'ny disinfectant. Ao amin'io dia manome fampiononana lehibe ho an'ny mpanjifanao sy ny mpiasa ianao. Farafaharatsiny afaka matoky ianao fa manao izay fara herinao amin'ny ezaka atao mba tsy hielezan'ny aretina mikraoba sy ny bakteria.
Io dispenser savony tsy misy fotony io dia tany am-boalohany hampiasana varotra. Na izany aza, azonao atao koa ny mampihatra ity dispenser automatique an-tranonao ity. Rehefa te ho salama sy salama tsara ny ankohonanao, miaraka amin'ity mpanamory ity tsy misy mampihetsi-po, dia mety hanamora kokoa izany. Na fenoy savony na savony io, arakaraka ny fanao mahazatra. Satria manana endrika tsy manam-paharoa io dispenser savony tsy misy fotony io dia mety ho tafiditra ao anaty lakozia na efitra fandroana. Izy io dia manome fientanentanana mahafinaritra ny teknolojia maoderina any an-dakozia na ny efitra fandroana tsy misy toerana be aza.
Soraty ny dispenser savony tsy misy dikany
Ny mpanamory ny savony tsy misy tanana momba ny WOWOW dia mety sy voadio satria afaka manasa tànana tsy misy tànana ianao tsy hikasika na inona na inona rehefa mampihatra savony na tanana saniterer. Ho fanampin'izany, ity savika tsy misy fotony ity miaraka amin'ny sensor automatique dia manana endrika kanto sy kanto. Tsy mitazona toerana fotsiny izy io, fa fitaovana fandrafetana zavatra tsara ao amin'ireo toerana iraisan'ny besinimaro toy ny ao an-tranonao koa. Ity mpanamory savony tsy misy fotony ity dia tena hanampy ny sarin'ny orinasa misy anao ho orinasa maoderina izay mikarakara ny mpanjifany, ny mpiasa ary ny fahasalamany.
Ankoatra ny famolavolana, WOWOW dia efa nieritreritra tsara ihany koa ny fiasan'ity mpanamory savony tsy misy fotony ity. Ny fahamoran'ny fampiasana dia mazava ho azy fa ny tombotsoan'ny dispenser automated ity. Saingy amin'ny famafazan-dàlana tsy misy fihenjanana lehibe indrindra ny fanamby lehibe indrindra dia ny fanomezana ny ranon-javatra tsara, tsy misy moka. Ny fantsom-panafody tsy manaparitaka ny WOWOW tsy manam-paharoa dia mifehy ny habetsaky ny ranon-javatra ary manakana ny fandevenana. Noho izany, ny mpanapotsitra sabatra tsy manafina WOWOW dia manampy anao hisorohana mikraoba hiparitaka amin'ny fahazoana mpanjifa avo indrindra, ary tsy misy fako.
Ny savonin'ny savony tsy mana-jotra tsy manara-penitra WOWOW dia manasongadina famolavolana roa-herinaratra, satria afaka mandrehitra herinaratra na herinaratra DC. Mahatonga ity mpisera ity tsy misy fiasa ity ho mora ampiasaina ary azo apetraka haingana, na dia tsy misy rindrina eo akaiky eo aza. Mandefa lavaka kely fotsiny ianao eny an-tendrombohitra ahodin-drà, ary azonao atao ny mametraka an'io dispenser savony tsy misy fotony io nefa tsy misy olana. Eo ambanin'ny lakozian'ny efitrano fandroana azo averina afaka manolo mora foana ny famatsiana rano, ary tsy hita na iza na iza. Amin'izany fomba izany ny esthetics dia tsy manimba ny fomba rehetra ary afaka manolotra serivisy feno ianao miaraka amin'ity mpanamory savony tsy manintona minimalistic ity.
Toy ny vokatra rehetra ao aminy, ny WOWOW dia mampiasa teknolojia avo lenta ahafahana manolotra vokatra avo kalitao. Ary noho ny fanaovan-javatra mahomby sy ny famokarana avo lenta, ny WOWOW dia afaka manolotra ity mpanaparitaka sabatra tsy misy dikany amin'ny vidiny mirary. Amin'ny WOWOW dia mirehareha amin'ny vokatra sy ny kalitao atolotra ho an'ny mpanjifantsika avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izahay. Noho izany dia matoky izahay fa hanome anao mandritra ny 5 taona feno warranty. Raha toa ka tsy tanterahina araka ny nantenainareo azy ilay savony tsy misy kitapom-batsy, dia hosoloinay ny mpanamory ny saboranao tsy misy olana.
Ho fanampin'izany, ny WOWOW dia manome valiny vola 90 andro. Raha tsy maniry an'io dispenser savony tsy misy fotony io ianao dia hamerina anao fotsiny izahay raha tsy misy fanontaniana apetraka. Amin'izany fomba izany dia azonao atao ny manaparitaka ity teknolojia sensor infrainiera lavitra ity mba hisorohana ny fihanaky ny lakroa faharoa. Inona no andrasana?
Azafady mba mifandraisa aminay raha te handidy betsaka kokoa amin'ny dispenser amin'ny kitapom-baravarana tsy misy fetsy izahay.
Ny tombony azon'ny mpanaparitaka sabatra tsy misy dikany:
• Teknolojia infrareda teknolojia avo lenta
• Azo nofenoana savony, famono otrikaretina na fanadio tanana
• Volavola maoderina
• Fahombiazana avo lenta
• Na amin'ny fampiasana ara-barotra na an-trano
• Mora diovina ary mora ampiasaina
• warranty 5 taona
Q&A an'ny Dispenser savony mandeha ho azy:
(1) F: Te-hanamafy aho fa tsy mila batterie izany.
A: Afaka misafidy herinaratra AC ianao, tsy mila batterie.
2) F: Ahoana no ifandraisany amin'ilay savony "loharano" na tavoahangin'ny savony? Azo ampifandraisina amin'ny tavoahangy lehibe mipetraka eo amin'ny gorodon'ny kabinetra ve izy io?
A: Ny tavoahangy mahazatra dia 1L, izay ahantona mivantana eo ambanin'ny boaty fanaraha-maso. manana tavoahangy 5L ihany koa izahay, saingy ho lafo kokoa ny entana ho any Etazonia. Azonao atao ny mividy ny tavoahangy any Etazonia araka ny zavatra takinao. Mila manitatra ny fantsona eo anelanelan'ny tavoahangy sy ny boaty fanaraha-maso fotsiny isika. Samy afaka ampiasaina ny 5L sy ny 10L, ary azo apetraka amin'ny tany izy ireo.
(3) F: Inona ny haben'ny lavaka takiny? Efa manana lavaka ho an'ny mpaninjara savony manual ao amin'ny kaoniko aho.
A: Ny haben'ny lavaka: 25-35mm.
SKU: Tapelina tsy misy pentina any amin'ny Dispenser-2 Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana fandroana sensor Tags: Deck Mounted, Motion Sensor, Saro-pofona tsy misy fotony
Brass, Chrome, tsiranoka ranoka